मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2016-02 > हाम्रो संग्रहालय पत्ता लगाउनुहोस्
ग्रीक पौराणिक कथामा, म्युस देवी देवताहरू हुन् जसले मानिसहरूलाई साहित्य, कला र विज्ञानमा प्रेरणा दिन्छन्। नौ म्युसको कथाको कारण, व्यक्तिहरू उनीहरूको खोजीमा थिए र उनीहरूका सृजनात्मक प्रयासहरूमा मद्दतको आशा राख्दै। आधुनिक समयमा, बेलायती लेखक रोबर्ट ग्रेभ्सले पौराणिक कथा र म्युसेसको पुनरुत्थान भएको लोकप्रिय अवधारणाका बारे उपन्यासहरू लेखेका थिए। लेखक, गायक र नृत्यकर्मीहरूले मद्दत र प्रेरणाको लागि म्युसेसलाई फेरि कल गर्न थाले। ग्रीक देवीदेवताहरूमा कसैलाई वास्तवमै विश्वास थियो कि थिएन भन्ने कुरामा शful्का छ। यद्यपि धेरै कलाकारहरू, प्रेमीहरू र प्रसिद्ध व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई आफ्ना म्युसको रूपमा हेर्छन्।
प्रेरणा वास्तवमै कहाँबाट आउँदछ?
शब्दको वास्तविक अर्थ प्रेरणा माध्यम सास फेर्नुहोस् वा केहिमा हावा , ईश्वरीय वा अलौकिक प्राणीले विचार वा सत्य बताउँदछ र सास फेर्छ वा व्यक्तिमा उड्दछ। जब इसाईहरू प्रेरणा भएको कुरा गर्छन्, तब तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि तिनीहरूले परमेश्वरबाट कुनै विचार वा विचार पाएका छन्। त्यसोभए तिनीहरू यो मानिलिन्छन् कि उनीहरूको लेखन र बोली परमेश्वरबाट प्रेरणा भएको हो र उहाँ तिनीहरूको विचार र सीपमा उनीहरूलाई डोides्याउनुहुन्छ।
किनभने रचनात्मकता परमेश्वरबाट आउँदछ, हामी उहाँलाई हाम्रो म्युज भन्न सक्छौं। पवित्र आत्मा एक हुनुहुन्छ जसले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, डोides्याउनुहुन्छ र प्रेरित गर्नुहुन्छ। उसले हाम्रो छलछामलाई पन्छाउँछ र हामीलाई येशूको सत्यमा पुर्‍याउँछ जो जीवन, सत्य र मार्ग हो। यदि उसले हामीमा पिताको जीवन सास गरिसकेका थिएनौं भने हामी कुनै खास तरिकामा जीवनविना बाँच्नेछौं। उहाँ हामीलाई आफ्नो शक्तिले उत्साहित बनाउनुहुन्छ र हामीलाई आफ्नो कल्पनाशक्तिको चमकले भर्नुहुन्छ। सृष्टि गर्ने कार्य परमेश्वर आफैंको अंश हो जुन उहाँले हामीलाई जीवन मार्फत सहयोग गर्न र हाम्रो जीवनलाई समृद्ध पार्न प्रदान गर्नुभयो। यो प्रशस्त जीवनको भाग हो जुन हामीलाई यूहन्ना १०:१० मा प्रतिज्ञा गरिएको छ। हाम्रो रचनात्मकताले हामीलाई धेरै चीजहरू गर्न अनुमति दिन्छ जुन केवल आवश्यक छैन, जस्तै घरहरू र मेशिनहरू निर्माण गर्दा, तर हामीलाई कला प्रदान गर्दछ। आग्रह, सायद केहि सिर्जना गर्ने चाहना पनि, हामीमा गहिरो जरा गाडिएको छ र हाम्रा प्रायः क्रियाकलापहरूको पछाडि इन्जिन हो।
हामी कसरी भगवानलाई हाम्रो म्यूज बन्न दिन सक्छौं जसले हामीलाई निर्देशन र प्रेरणा दिन्छ जुन हामीलाई चाहिन्छ र हामी के चाहन्छौं? हामी प्रार्थना सुन्न अभ्यास सुरु गर्न सक्छौं। प्रायः व्यक्तिहरू प्रार्थनाको सामान्य रूपसँग परिचित छन्: परमेश्वरसँग कुरा गर्दै, हाम्रा समस्याहरू र सरोकारहरू वर्णन गर्दछन्, उहाँलाई धन्यवाद दिन्छन् र आदर गर्दछन्, अन्य व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्दछन् र केवल हाम्रो विचारहरू साझा गर्दछन्। प्रार्थना सुन्नलाई थोरै अनुशासन चाहिन्छ किनभने यसमा मौनता चाहिन्छ। प्रार्थनाको क्रममा चुपचाप बस्न गाह्रो हुन्छ किनकि हामीलाई प्राय: केहि भन्नु पर्ने आवश्यकता महसुस हुन्छ। मौन असुविधाजनक हुन सक्छ: हाम्रो विचारहरू अन्य दिशातिर लाग्छ, हामी विचलित हुन्छौं र हामी परमेश्वरको आवाज सुन्न नसक्ने भएकोले, हामी अनुमान लगाउँछौं कि उहाँ हामीसँग कुराकानी गर्नुहुन्न।
प्रार्थनाको समयमा परमेश्वरसामु मौन बस्न समय र अभ्यास चाहिन्छ। एक शुरुवातको रूपमा, तपाईं बाइबल वा भक्तिपूर्ण पुस्तकबाट पाठ पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि भगवानमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई तपाईंको आफ्नै विचारहरू डो guide्याउन र निर्देशित गर्न सोध्नुहोस्। जब तपाइँले बोल्ने चाहना महसुस गर्नुहुन्छ, याद गर्नुहोस् कि तपाइँ सुन्न चाहानुहुन्छ र बोल्न चाहनुहुन्न। डलास विलार्डले श्रवण परमेश्वर भन्ने प्रेरणादायक पुस्तक लेख्यो जुन कसरी सुन्ने भनेर विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ। निस्सन्देह, भगवान कुनै स muse्गीत भन्दा धेरै हुनुहुन्छ र यदि हामी हाम्रो जीवनको सबै क्षेत्रमा प्रेरणा र निर्देशन खोजिरहेका छौं भने हामीले उहाँलाई हेर्नु पर्छ र गर्नुपर्दछ। उहाँ हाम्रो मार्गदर्शक बन्न इच्छुक हुनुहुन्न र निरन्तर बोल्नुहुन्छ र हामीमा प्रेम र बुद्धिको सास लिनुहुन्छ। हामी सबैले उसको मायालु आवाज सुन्न सिक्न सकौं।